UJames Brown (ngoMeyi 3, 1933 - ngoDisemba 25, 2006) wayengumzali oyisiseko we-funk kunye nomnye wezinto ezibalulekileyo zeimvumi zaseMerika zonke.
UBrown wayengumfanekiso womculo kunye novelisi. Wayebizwa ngokuthiwa ngu "Thixo weMphefumlo."
UBrown wayenomyalezo kunye nomculo ukuba uphile ngokuvumelana nesi sihloko. Kodwa naye wabeka "iCandelo elilungileyo" phambili ngomsindo olutsha oluthambileyo owaza lwaziwa ngehlabathi njenge "hip-hop." Akukho into eyenzekayo ukuba uMnumzana Brown ungomnye weengcali ezithembekileyo kwi-hip-hop (jongela "Hlaziya, Ngena Kuyo kwaye Ufake" isampula ku-Nas '"Baphi Ngoku" ukusuka kwi- Hip-Hop Is Dead ) de umhla.
Ubuchule bakhe buyingcipheko enkulu kwiimpawu ezithandwayo zomculo, kuquka uR & B, umphefumlo, funk, disco, rock 'n' roll kwaye, kunjalo, rap.
Inyaniso : Ukuba uvile naliphi inani lama-alb alb ebalulekileyo ukusuka kuma-1980 okanye ngo-1990, mhlawumbi uhlangabezane nesampula kaJames Brown. Ukusuka kwi-BDP ukuya kwi-BDK, i-hip-hoppers ifake uluhlu olunobuninzi lweeBrown ezisuka kwiingoma zazo.
I-Brown ye-1970 ethi "Funky Drummer" ihlala ingomnye weengoma eziphambene naso kwi-hip-hop. Iingoma zisebenze njengomqolo weengoma ezininzi ngokuthandwa kweNas, uDkt uDre kunye neNkcazo yoMphakathi.
UWan West , umlinganiso weempendulo, uboleke kwiNgqungquthela ethi "Funky President" ngezihlandlo ezininzi ("UThixo Omtsha Uhamba," "Clique").
UBrown wahlonishwa phantse kuzo zonke iintlobo: i-funk, umphefumlo, ilitye kwaye, ngokuqinisekileyo, i-hip-hop. Xa kuziwa kwi-hip-hop, uJames Brown ngumxholo womculo apho phantse yonke i-rap beat yakhiwa.
Abavelisi bakaRa babenza ubugcisa kwi-sampling uMnumzane waseNtshonalanga # 1.
UBrown wasibusisa ngesingqungquthela esiphayona esenza isandi se-hip-hop. Ngokwenene wayeyi-godfather ye-hip-hop.
Impembelelo kaBrown yayingesisoloko isesimweni somculo. Ngokomzekelo, unokuva umoya ka-1973 othi "I-Payback" yonke iKendrick Lamar "uKum Kunta."
Iindlela ezimbalwa uJames Brown uphephe ngayo i-hip-hop:
Isitayela sakhe sokubiza kunye nesiphendulelo sathonya ama-hip-hop.
Iingcamango zakhe ezinamandla kwiirekhodi zangaphambili ziphefumle iintsimbi zokuqhawula kunye neentambo ze-funk.
Ezinye zeempawu zakhe zomculo kunye neenyawo eziphefumlelweyo zakhuthaza abancinci abancinci.
"I-Funky Drummer," uJohn Brown ka-1969 wokurekhoda kunye nomculi uClyde Stubblefield, i-break-sampled break in hip-hop.
Ngomhlaba ogqithisayo obizwa ngokuthi "Funky Drummer," "Yenza I-Funky," kwaye "Yiphakamise okanye uyibuyise," uBrown wayedala ikusasa apho i-hip-hop yayiza kuvela khona. UBrown unokwabelwano olungenakuphikwa kunye ne-hip-hop.
Iimpawu zithandwa nguJames Brown:
Umthombo osampuli : UBobby Byrd - "Amantambo aMnandi (Ndiza, Ndiza, Ndiza"
I-Sampled On : Big Daddy Kane - "Inqabileyo"
Umthombo wesampula : UBobby Byrd - "Ndiyazi Ukuba Unomphefumlo"
Ingoma : uEric B. & Rakim - "Ndiyazi Ukuba Unomoya"
Umthombo wesampula : uJames Brown - "Funky Drummer
I-Sampled On : UDkt. Dre - "Makhendule" | Nas - "Phuma"
Umzekelo wesampula : uJames brown - "uMongameli oMnandi"
I-Sampled On : I-Music GOOD - "UThixo Otsha Uhamba" | Big Sean - "Clique"
Umthombo wesampula : uJames Brown - "I-Payback"
I-Sampled On : UJoe Budden - "Pump It Up"
Umzekelo wesampula : UJames Brown - "Yithi, Ndimnyama kwaye ndiyaziqhayisa"
I-Sampled On : I-Cypress Hill - "Fakela kwisibilini"
Umzekelo wesampula : "Hamba uphumele loo nto"
I-Sampled On : Iintshaba Zoluntu - "Uvukelo Ngaphandle Kwesikhashana"
Umthombo wesampula : uJames Brown - "Amathanga ahambayo"
I-Sampled On : I-Gang Starr - "Iiminyathelo ezimbini eziphambili"
UJames Brown uya kuhlale ekhunjulwa njengamandla emzimbeni kwimvelo ye-hip-hop.
Kwangathi umphefumlo wakhe uphumula uxolo.
Umculo wexesha lobuRoma
7 Iingxelo zeNkundla eziPhambili
I-Electron Ukuthathwa Inkcazo
Ukuthenga nokuKwakha Umkhumbi weMkhukula
I-Bristol Zoo Parking Attendant
Izethulo ezisemthethweni ngesiJapane